Amnandi Futhi okunempilo oatmeal amakhukhi: iresiphi kusuka Julia Vysotsky
Kukhona ezimbalwa abantu kakhulu othanda oatmeal, kodwa amakhukhi kusuka lo mkhiqizo okukhanga abantu abaningi. INkos iqinile futhi flavorful, kungaba ibhulakufesi emangalisayo noma dinner omuhle. Kunezindlela eziningi ngalo ungakwazi ukupheka oatmeal amakhukhi. Recipe kusukela Julia Vysotsky has ongakhetha eziningana.
Kuye izingxenye kokuqala, zingase zishintshe kakhulu ukubhaka oatmeal amakhukhi. Recipe kusukela Julia Vysotsky nati kanye ushokoledi kuyinto ngempela yasekuqaleni. Ngoba uzodinga mikhiqizo: 1 ingilazi oatmeal, ufulawa, ushukela (brown) namantongomane ochotshoziwe, amagremu 100 ibhotela amaqanda 2 ingcosana uLwandle Lukasawoti futhi ½ white chocolate tile.
Lungiselela khekhe ngezigaba 3:
Uxove inhlama. Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka ukuba igcwale amanzi ibhotela kancane, bese ufaka ushukela uphehle kahle zonke. Ngemva le ngxube ingezwe ufulawa, usawoti, amaqanda, amantongomane, futhi bonke okuxubile kahle. Ekupheleni inhlama kakade kuqedile engeza ushokoledi oqoshiwe.
Kusukela kwaphumela mass viscous yanele ukuba Roll amabhola kumele isilinganiso usayizi izandla, Roll in ufulawa, bese enwetshiwe epanini. Njalo workpiece kumele kancane cindezela phansi ukuze kufana ikhekhe encane.
amakhukhi Bhaka kufanele kube amaminithi 20 kuhhavini. Izinga lokushisa kufanele kube 180 degrees.
It kuvela elimnandi kakhulu futhi ezinoshukela oatmeal amakhukhi. Recipe kusukela Julia Vysotsky kubathandi ushokoledi.
okufushane AMAZING futhi elinuka
Eqinisweni, ngisho senkosikazi imfundamakhwela ungenza oatmeal amakhukhi. Recipe kusukela Julia Vysotsky kunjalo elula, ukuthi umsebenzi ngeke kubangele izinkinga ezinkulu. Into ebaluleke kakhulu - ukuba itholakale izithako ezidingekayo: 400 g oat ishq kudingwa 250 g bhotela noshukela, 1 egg, 300 g ufulawa 100 ml ukhilimu (mhlawumbe ngo-10%), 3 amathisipuni baking powder, 200 we omisiwe wageza amathayili ka oncibilikile (ngokokuhlobisa).
Inqubo kumele kwenziwe kanje:
Kancane sashintsha ibhotela, bese ukuxuba ke ushukela, ngesiswebhu ibe mass homogeneous.
Engeza lonke izithako, uxove inhlama. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukhilimu sengezwe zokugcina.
Ukubhaka walala ishidi engenalutho yesikhumba bese bayibeke phezu izingcezu inhlama ngesimo zithutha round.
Thumela kuhhavini baking imizuzu 10, lapho izinga lokushisa pre-isethi degrees 200.
amakhukhi Ready enongiwe aphume ungene ipuleti futhi ngobumnene ufafaze ushokoledi yashizi ngenkathi sifudumele.
Ukuze uthole sibalo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu
Ukuze dessert ozithandayo iqukethe kilojoule njengoba low ngangokunokwenzeka, kungcono ukupheka oatmeal amakhukhi ngaphandle ibhotela. Lokhu kukhetha ngisho kulula esedlule. Ngoba ngempela udinga: 90 amagremu kafulawa, 200 of oat ishq, 80 g ushukela, 5 g we disintegrant ezivamile, 40 ml ubisi lonke futhi 125 g kwanoma iyiphi yogurt.
Ingabe kudingeka amakhukhi kanje:
Xhuma ndawonye izithako ezomile.
Thela ubisi iyogathi kanye ukuhlanganisa ingxube okuholela imikhiqizo ezomile. Uma wayefisa, lo unama okuholela kungenziwa wanezela omisiwe, ukhokho noma amantongomane.
Inhlama eqeda ngesipuni (noma izandla ezimanzi), wagqoka bhaka uphahlwe yesikhumba.
Bhaka kuhhavini imizuzu engaba ngu-15.
Kulabo abathanda a amabhisikidi crispy, kube kuhle ukuba ucindezele workpiece kuthreyi ukuze ukhiqize njengoba nomzimba omncane ngangokunokwenzeka. Kodwa ngemva wokubhaka kudingekile ukuhamba umkhiqizo osuphelile kuhovini oshisayo imizuzu embalwa. Izingane futhi uthanda onjalo ubumnandi engavamile.
Kunzima kakhulu ukuba ujabulele amakhekhe for inyama. Ngempela, khona amaqanda ayikuvumeli ukuba zihlanganisa izitsha ezifana ekudleni kwakho. Kodwa Julia Vysotsky, futhi Esimweni esinjalo kukhona kukho. Bhisikidi kusukela oat ishq ingalungiswa ngendlela ehluke ngokuphelele. Ngenxa yale njongo kuphela kudingeka 10 amagremu of nati noma izithelo ezomisiwe, 200 of izithelo puree, 2 izinkomishi oat ishq futhi 10 g kakhukhunathi.
amakhukhi Vegetarian ilungiselela esicacile:
Ishq ugaye for 1 minute in a blender.
Engeza izithako esele okuvela kuyo le ekwakhiweni kanye uxove inhlama. Kufanele uthole ngempela okunamathelayo.
On baking izandla noma usebenzisa preform spoon emise walala ngaphambilini walala isikhumba sakhe.
Thumela kuhhavini imizuzu 17-20, ngemuva kokufaka lokushisa therein we 180-190 degrees.
Amakhukhi uthole amnandi kakhulu, ngakho asikho itiye noma ubisi hot akwanele. Futhi njengoba puree, ungasebenzisa cishe kunoma iyiphi izithelo (ipheya, apula, ubhanana kanye nabanye).
Pear pie e multivarka. zokupheka
Indlela ukupheka iklabishi imiqulu e multivarka "Redmond"
Indlela ukupheka amakhowe omisiwe: ongakhetha eziningana
Zokupheka Easy, ikhekhe yegolide
Indlela yokwenza caramel atholakala kuyi-sugar abe umphelelisi ezinhle kophudingi
"Afobazol" ngesikhathi sokukhulelwa: izinkomba, yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Ishaja ye-battery yemoto
Kuyini isifo usekela. Izimpawu isifo usekela ezinjeni kanye nokwelashwa.
Asturias, Spain: izikhangibavakashi, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Art. 152 RF CCP nekuphawula. A senkantolo ngaphansi Art. 152 RF CCP
Namacici abahlukile kusukela ubuhlalu
Ompompi basemgwaqeni engadini yakho
Film 2016 "Isihambi Uphelele": libuyekeza ababukeli. "Isihambi Uphelele" (2007): Izibuyekezo